Godot Engine: ihe mepere emepe na-emepe emepe na-aga n'ihu ọzọ. Site na Linux
Igwe Chineke: Mepee Isi Ihe Ngini Ngini Na-aga n'Ihu Ọzọ
Isaac | | Imebe, Egwuregwu
Godot Engine aburula onye ama ama. Ọ bụ ọrụ na-atọ ụtọ, ihe osise eserese iji mepụta egwuregwu vidiyo nke kpam kpam ghe oghe. Ọ bụghị naanị igwe eserese eserese dị adị, mana ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa dị na nke kachasị dị adị dị adị. Yabụ ọ bụrụ na ụlọ ọrụ egwuregwu vidio chọrọ ụdị ngwaọrụ ndị a na-emeghe, nke a bụ ọrụ ile anya.
Ugbu a Godot Engine enwela ọganihu na ozi ọma nke Godot 4.0. Kpọmkwem, onye nrụpụta Juan Linietsky gara n'ihu na-arịọ Chineke ka ọ gaa n'ihu na-aga n'ihu na nnukwu nzọụkwụ. Dịka ọmụmaatụ, n'isiokwu ndị gara aga na Godot anyị ekwuolarịrị mbọ ha na-eme iji gbakwunye nkwado maka Vulkan. Ugbu a ha emeela nnukwu ụzọ na ntụzịaka a. Ha gwara ha na ha na-akwagazi Vulkan.
Ihe ahụ niile dị mma. Ọzọkwa Godot 4.0 ga-enwekwa ndozi ndị ọzọ dị ka ọkụ 2D ugbu a mere n'otu ngafe iji melite arụmọrụ, mana ọ ka nwere mmachi ụfọdụ. N'aka nke ọzọ, ha agbakwunyela ikike iji nkọwa na nchapụta dị ka ọnụọgụ na dịka ederede enyere Sprite, AnimatedSprite, Polygon3D, wdg. A tinyekwara sistemu ihe eji eme ihe ọhụrụ 2D iji nye ohere ịmịpụta omenala nwere ọkaibe ọhụụ Vulkan.
Enweghikwa mgbochi na ole shaders nwere ike iji. N'otu aka ahụ, a na-achịkọta shaders ma chekwaa ya belata ibu egwuregwu ma nwekwuo arụmọrụ. Igwe 2D dị ugbu a na Vulkan ma arụ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-arụ n'akụkụ 3D iji weta ya na Vulkan. Na nkenke, arụmọrụ dị elu, mmezi eserese nke Vulkan wetara na ọgụgụ isi karịa maka oke akụ ... Interestmasị ihe ọdịnihu nke Godot nwere na ụdị ọdịnihu, mana ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ ugbu a 3.x.
Ozi ndị ọzọ - Weebụsaịtị gọọmentị nke Godot
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Imebe » Igwe Chineke: Mepee Isi Ihe Ngini Ngini Na-aga n'Ihu Ọzọ
Etu esi hazi ntọala ọtụtụ asụsụ na Ubuntu
Collabora gosipụtara nkọwa ndị ọzọ gbasara Monado